Ugwadule Sonoran | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | United States, Iziqondiso
Uyathanda izingwadule? Kuningi kuwo wonke amazwekazi futhi enye yezinto ezibaluleke kakhulu eNyakatho Melika yihlane laseSonoran. Isuka e-United States iye eMexico, ngakho-ke iyingxenye yemikhawulo yemvelo phakathi kwala mazwe womabili.
Izingwadule zikhethekile, zinezilwane zazo, izimbali zazo, namasiko azo. Emini kwesinye isikhathi ziyabhubhisa futhi ebusuku zivulela isibhakabhaka esimnyama nesinezinkanyezi, zimema wonke umuntu ozidlulisayo ukuthi azizwe emncane endaweni yonke. Namuhla, ezokuvakasha ehlane laseSonoran.
1 Ugwadule lweSonoran
2 Ezokuvakasha ehlane laseSonoran
Njengoba sishilo, isemngceleni ophakathi kwe-United States neMexico, eningizimu-ntshonalanga ye-United States, e-Arizona naseCalifornia. Ngasohlangothini lwaseMexico, luyihlane elishisa kunazo zonke futhi liba yingqikithi Amakhilomitha ayizinkulungwane ezingama-260 ayizinkulungwane.
Ugwadule lusenyakatho ekupheleni kweGulf of California. Ngasentshonalanga iboshwe yiPeninsular Mountain Range, eyihlukanisa nezixhaphozi zaseCalifornia, iye enyakatho, iba yindawo ebandayo, enezindawo eziphakeme kakhulu. Empumalanga naseningizimu-mpumalanga iqala ukugcwala ngama-conifers nama-oki, eningizimu, ehlathini elomile elomile.
Kuleli hlane izitshalo nezilwane ezihlukile zihlala: Izinhlobo ezingama-20 zama-amphibians, i-100 yezilwane ezihuquzelayo, izinhlanzi ezingama-30, izinhlobo ezingama-350 zezinyoni, i-1000 yezinyosi nezinhlobo zezitshalo ezingaba ngu-2 XNUMX ... Ngisho eduze komngcele neMexico, kunezinja eziningi, kuphela e-United States.
Iqiniso ukuthi ehlane kunamapaki amaningi kazwelonke nezikhumbuzo, kuzwelonke nakuhulumeni, izindawo zokugcina izilwane zasendle nezindawo ezingcwele, ngakho-ke uma uthanda lezi zindawo kunezindawo eziningi ezithakazelisayo zokuthola ulwazi.
Ingabe abantu bahlala ehlane laseSonoran? Yebo, ubelokhu eyiyo njalo ikhaya lamasiko ahlukahlukene. Nanamuhla, kuhlala abantu abangaba ngu-17 boMdabu baseMelika ezindaweni ezibekiwe ezisatshalaliswa eCalifornia nase-Arizona, kodwa naseMexico. Idolobha elikhulu kunawo wonke ogwadule iPhoenix, e-Arizona, enabantu abangaphezu kwezigidi ezine, eMfuleni iSalt.
Idolobha elilandelayo elikhulu liyaziwa, Tucson, eningizimu ye-Arizona, enabantu abangaba yisigidi, naseMexico, eBaja California.
Ezokuvakasha ehlane laseSonoran
Bathi leli hlane limangaza labo abavakashela okokuqala. Yomile, inkulu futhi iyathakazelisa kakhulu kulabo abakujabulelayo ukuhlola okukhulu ngaphandle ngezinyawo, ngebhayisikili, ngemoto. Yebo kunjalo, ngeke kube khona ukuhlola ngaphandle kohlelo oluthile lokuzulazula ngoba ungalahleka kalula futhi ... kahle, ube nesikhathi esibi. Ungaphumuli ucabanga ukuthi iselula ixazulula yonke into, akulimazi ukuba nemephu yephepha ngoba ayilahli ibhethri noma ilahlekelwe yisiginali, into ejwayelekile ogwadule.
Ngaphandle kwedivayisi ye-GPS futhi kufanele alethe amanzi futhi uzibophezele ekuphuzeni ilitha ngehora, nokudla. Izembatho nazo ziyinto ebalulekile ngoba isimo sezulu singeqile: kungashisa kakhulu noma kubande kakhulu, kuya ngesikhathi sonyaka noma i-adventure okhetha ukuyenza ezokusa, mhlawumbe, ezintabeni noma emihosheni.
El ISonoran Desert National Monument Yasungulwa ngoJanuwari 2001, ngaphansi kukaMongameli uClinton, ukuvikela yonke indawo kanye nemvelo yayo. Iqiniso ukuthi livela ku eziphilayo okukhulu kakhulu: kusuka ezikhungweni zezintaba ezihlukaniswe yizigodi ezibanzi kuya emahlathini e-saguaro cactus, afana nalapha. Ngaphezu kwezimila nezilwane, indawo evikelwe nayo inayo izingosi ezibalulekile zomlando.
Hay amadwala ngemidwebo yomhume, izinkwali lapho kutholwe khona izinto zakudala, izinsalela zezindawo zokuhlala unomphela, Ukuzalwa kwabantu bamanje bomdabu nezinsalela zasendulo imizila yomlando njengoMormon Battalion Trail, iJuan Bautista de Anza National Historic Trail noma iButterfield Overland Stage Route ...
Phakathi kwe amasayithi wokuthakazelisa ngaphakathi kwepaki singakhuluma ngezinye. Isibonelo, yena Ipaki yesizwe iSaguaro. I-saguaro iyi- i-cactus engavamile lokho kwesinye isikhathi kuthatha izinhlobo zabantu. Ihlukile kule ndawo futhi ingafinyelela ezindaweni eziphakeme kakhulu, kuze kube manje ukuthi iyinhlobo evikelwe. Ipaki inezindawo ezimbili, empumalanga nentshonalanga, futhi zivulekile kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwelanga, ngaphandle koSuku lukaKhisimusi. Kuzo zombili lezi zindawo kunezikhungo zezivakashi futhi kubiza u- $ 5 ukungena ngezinyawo noma ngebhayisikili.
Enye indawo ethokozisayo yi- Isikhumbuzo se-Organ Pipe Cactus National. Kuyipaki yasendle, enezintaba, neqoqo elihle lezitshalo lapho i-cactus ye-organ pipe iyinkanyezi, i- umdolofiya omude kunayo yonke ezweni. Kunesikhungo sezivakashi, esivalwa kuphela ngamaholidi kahulumeni. Kuyisizini ephezulu ngoFebhuwari, Mashi nango-Ephreli. Kukhona futhi i- ILake Havasu State Park, elinye lamachibi athandwa kakhulu akhiqizwa ngamadamu eMfuleni iColorado.
Leli chibi laziwa ngalo Ibhuloho laseLondon, kusuka lapho umbono uhlelwe khona, ngaphezulu ngoba ubheke emzaneni waseNgilandi onamabhilidi eTudor afakiwe. Kuyinto enhle kakhulu. ILake Havasu City yazalwa ngemuva kokwakhiwa kweDamu iParker futhi idolobha elihlinzeka ngezinto eziningi. Ungenza futhi okuningi ezemidlalo zamanzi futhi iheha izivakashi unyaka wonke. Ungahamba ngesikebhe, uhambe udobe futhi wenze imisebenzi ngaphandle. Ezindaweni ezizungezile kukhona Izimayini zomlando, amadolobhana alahliwe, imizila yokubaluleka kokuma komhlaba...
El IKatcher Caverns State Park igxile kumaKatchner Caverns atholakala ngawo-70. Ingabe i- umgede omkhulu, enamakamelo amabili alingana nezinkundla zebhola, futhi namuhla ingahlolwa ngokulandela uhambo olukuvumela ukuthi ububonge ubuhle bayo bangaphakathi obunemibala. Leli sayithi livulwa nsuku zonke kusuka ngo-7 ekuseni kuya ku-30 ntambama futhi izinkambo zihamba njalo ngemizuzu engu-6. Kuvalwa ngoKhisimusi kuphela.
El IPico Picacho State Park Kuku-Interstate 10 eningizimu ye-Arizona futhi inayo le ntaba ende kakhulu. Bangu imizila okukuvumela ukuthi ubonge ubuhle bendawo futhi kungcono ukukwenza entwasahlobo yezimbali zasendle. Inesikhungo sezivakashi esinetende nendawo yokukhempa, indawo yepikiniki ... Lapha, ngezikhathi zeMpi Yombango YaseMelika, iMpi yasePasic Picacho yenzeka futhi minyaka yonke, ngoMashi, kwenziwa ukulingiswa kabusha kwempi yomlando.
Ukukhuluma ngezindawo ezinomlando lapha ehlane laseSonoran okunye okuhehayo yi Ijele Lendawo Yuma, a imnyuziyamu ephilayo yasentshonalanga yakudala. Zingaphezu kwezi-3 izigebengu ezidlule lapha, phakathi neminyaka engama-33 leli jele lisebenza, phakathi kuka-1876 no-1909. Umbhoshongo wokuqapha namaseli we-adobe agcinwe kahle kakhulu ngakho ukuvakasha kuyathakazelisa. Leli sayithi lise-Arizona futhi ungalazi uma uthatha isinqumo sokwazi indawo yaseYuma ngokulandelana.
Ijele lisenkabeni yoGwadule iSonoran kanti le ndawo ingenye yelanga kakhulu ezweni ngakho-ke liyashisa kakhulu… Kepha kuyathakazelisa uma uthanda umlando wase-Old West. Uma kunjalo, engeza ukuvakasha kufayela le- I-Yuma Crossing Historical Park ngezakhiwo zayo ezindala nezinto zokuhamba, ofakazi bangaleso sikhathi.
Ekugcineni, sinefayela le- I-Arizona Desert Museum - iSonora. Kuyinto a inhlanganisela yomnyuziyamu womlando wemvelo, i-zoo, kanye nensimu yezitshalo. Kunemibukiso ehumushekayo enezilwane eziphilayo, ezihlala ezindaweni zazo, nokunye okufana namakhilomitha amahlanu emizila eya ehlane. Ama-landscapes mahle futhi isikhathi esihle sokuvakasha kusuka ngoSepthemba kuya ku-Okthoba, lapho isimo sezulu singesincane.
Umnyuziyamu unezigaba eziningana: i-Cactus Garden, i-Hummingbird Aviary, i-Cat Canyon, indawo yezilwane ezihuquzelayo nezingenamgogodla, imigede kanye namaminerali ayo… Kunezigaba eziningi okufanele zihlolwe futhi ngasinye sinikeza izindawo ezinhle kakhulu. Kuyinto i-oasis yemvelo.
Kuze kube manje isampula yalokho iGwadule iSonoran elisigcinele khona. Uma le mihlaba iyinto yakho, iqiniso yilokho Kuyindawo okungafanele iphuthelwe e-United States.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » United States » Ugwadule lweSonoran
I-Puerto de Santa María, eCádiz